Please trust and verify my customer.(ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးမှ Service အပ်ပါ။ ) | Online Service Center Myanmar -->
Please trust and verify my customer.(ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးမှ Service အပ်ပါ။ )
OSC-Myanmar( Online Service Center Myanmar )က ပေးနေတဲ့ Service တွေထဲကအချို့ကို 3.6.2019 နေ့ကနေရပ်နားထားခဲ့လိုက်တာ ဒီနေ့14.8.2019 နေ့အထိပါ။ ဘာကြောင့်ရပ်နားထားခဲ့တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Service များကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ။
ဘယ်လိုအလွဲသုံးစားတွေလုပ်လို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Facebook Account နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Hack ခံရတာ၊ Lock ကျတာ၊ Recover ပြန်လုပ်ပေးတာ၊ Security ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြုလုပ်ပေးတာတွေကိုအသုံးချပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်သွားကြတာကြောင့်ပါ။
Facebook Account တွေ Hack လုပ်ခံရပြီဆိုရင် အမြဲတမ်းအခမဲ့ပဲကူညီပေးပြီး၊ အခြား Facebook Account Help Service တွေမှာဆိုရင် Service ခကို $20 သာ အမြင့်ဆုံးယူပါတယ်။ သို့သော် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲ ကြားထဲကနေ လာရောက်အကူအညီတောင်းပြီး အကောင့်ပြန်ရသွားပြီဆိုတာနဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဆီမှာ အနည်းဆုံး ၃ သောင်းကနေ၊ ၅ သောင်း၊ ၁သိန်း၊ ၃သိန်း၊ ၅သိန်း၊ အထိ ကြေးအမျိုးမျိုးနဲ့တောင်းခံကြတယ်ဆိုတာပြန်သိရပါတယ်။ OSC-Myanmar ရဲ့အမည်ကိုအသုံးချသွားသူတွေရှိသလို သူတို့ပဲလုပ်ပေးသလိုလိုနဲ့ ကြားထဲကနေလုပ်စားသွားကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Admin များအနေနဲ့Facebook Account ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အဲ့ဒီလိုမတန်တဆတောင်းယူတာမျိုးတွေမလုပ်ပဲ $20 သာတောင်းယူပါတယ်။ ဒါကလည်း ဟိုးယခင်တုန်းက အခုလိုအလွဲသုံးစားတွေလုပ်ခဲ့တာကြုံခဲ့ရလို့မည့်သည့်အရာမှ အလကားမရဘူးဆိုပြီး တန်ရာတန်ကြေးတခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးယူဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ Admin ထဲမှ စတင်တည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် Aung Kyaw Soe နဲ့ပြည်ပကနေ အားရင်အားသလိုကူညီပြီး Service ပေးနေတဲ့ Admin အကိုတွေ အမတွေဟာ ဒီ Service ပေးမှထမင်းစားရသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ Online ပေါ်မှာ အားလပ်နေတဲ့အချိန် အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီဖို့ကိုပဲအဓိကရည်ရွယ်ပြီး Service အနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးနေကြတာပါ။
ဒါကြောင့် ယခုအချိန်မှစပြီး ကျွန်တော်တို့ Admin team မှ တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် Facebook team မှ identity verification checks လုပ်သလို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Service လာအပ်သူများကို identity verify ပြုလုပ်ပြီး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရယူပြီးမှသာ Service လာအပ်တာကိုလက်ခံပြီးပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။
ဘယ်လို Identity Verification Check လုပ်မှာလဲ...?
ဥပမာ - Facebook အကောင့် Hack ခံရလို့၊ Lock ကျလို့ or တခုခုဖြစ်လို့အကူအညီလာရောက်တောင်းခံတဲ့အခါ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်တောင်းခံတတ်သလို၊ ကြားခံတယောက်ယောက်ကနေဆက်သွယ်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာ အကူအညီလိုအပ်တဲ့ Account owner အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Admin ထဲမှ တယောက်နဲ့ Video call ပြောရပါမယ်။ လိုအပ်ရင် Video call ပြောရင်း ID Card များကို ပြသခိုင်းပြီးအတည်ပြုစစ်ဆေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါမယ်။ အတည်ပြုစစ်ဆေးပြီး မယုံကြည်ရသူလို့ယူဆရင် Service ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ကြားခံလုပ်စားနေတဲ့သူတွေ လုပ်စားလို့မရတော့အောင် အကူအညီလိုအပ်သူကိုယ်တိုင် Video Call မဖြစ်မနေပြောရပါမယ်။ Account က Hack ခံလိုက်ရလို့or Lock ကျနေလို့အကောင့်အသစ်မဖွင့်ရသေးလို့ပါဆိုပြီးလုပ်လို့မရပါဘူး။ အကောင့်အသစ်နဲ့ပဲလာပြောပြော၊ ကြားခံအသိရဲ့ကောင့်ကနေပဲလာပြောပြော၊ Video Call ပြောပြီးအတည်ပြုမှာဖြစ်လို့ မဖြစ်မနေ Video call ပြောကိုပြောရပါမယ်။ အကယ်၍ မပြောနိုင်ဘူးဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ဆီကအကူအညီကိုလည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာ တခါထဲသိရှိထားစေချင်ပါတယ်။
Identity Verification Check လုပ်တာက ဘယ် Service လာအပ်အပ် Check မှာလား...?
မလိုအပ်တဲ့ Service များအတွက်တော့ Check မလုပ်ပါဘူး။ ဥပမာ - Facebook Boost လုပ္တာ၊ Boost Error ရှင်းတာ၊ မျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းသိပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်းနဲ့ အခြားသင်တန်းတွေက ပြင်ပမှာပဲပေးတော့တာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်လည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ Facebook Account Help Service တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကြားထဲကနေလုပ်စားနေသူတွေလုပ်စားလို့မရတော့အောင်ပဲ Check လုပ်မှာပါ။
အကူအညီလိုအပ်သူ( Account Owner ) များအနေနဲ့အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုအရစစ်ဆေးမှုကို ကြည်ဖြူစွာလက်ခံပြီး လိုက်နာပေးဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ကိုယုံကြည်လို့ရပြီဆိုတော့မှ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးမှာမို့ပါ။
ဒီ Post ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ Service အပ်ပါ။
Hack ခံရသည့်အကောင့်များကို အခကြေးငွေ တပြား၊ တကျပ်မှ မယူပဲ အမြဲတမ်း အခမဲ့သာကူညီပေးပါသည်။
Osc February 4, 2020 at 7:22 PM